Maxamed Cabdirisaaq: Waxba iskama aanay bedelin go’aankii Baarlamaanka uu qaatay… – Hagaag.com
Maxamed Cabdirisaaq: Waxba iskama aanay bedelin go’aankii Baarlamaanka uu qaatay…
Arrintan ayaa waxa ay soo baxday kaddib markii wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullahi Farmaajo, uu booqasho ku tegay caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kinshasa, halkaasi oo uu kula kulmay madaxweyne Felix Tshisekedi oo haatan ah guddoomiyaha Midowga Afrika.
“Waxba iskama aanay bedelin go’aankii baarlamaanka uu qaatay, taas waa howl baarlamaanka u taal,” ayuu yiri wasiir Maxamed oo intaas ku daray: “Doorashadu noocwalba oo ay ahaato, mid toos ah, mid dadban, doorasho marwalba waa inay noqotaa mid nabad ah, mid loo dhan yahay, mid waadax ah loo wada jeedo, si natiijada ka soo baxdaa ay u ahaato mid dadka oo dhan ay ku qanci karaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in uusan jirin wadahadal furan oo hadda socda oo xal loogaga gaarayo khilaafka, hasayeeshee waxa uu soo dhaweeyay in Midowga Afrika uu dowr fududayn ah ku yeesho arrinta doorashada Soomaaliya.
Maxamed Cabdirisaaq waxa uu sheegay in Farmaajo ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in dhibaatooyinka Afrika yaalla lagu dhammeeyo xalal Afrikaan ah.
“Marba marka ka dambaysa waxaa soo badanayay in Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, dowlado kale iyo ajaanib badan ay runtii raadinaayeen inay qeyb kaga noqdaan, dowladda federaalka ah arrintaasi marwalba waa ka soo horjeedaa.”ayuu sii raaciyay.
Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa saddex qoraal oo kala duwan soo dhigey boggiisa Twitterka waxaana ka dhashay shaki ah in uu doonayo in markale wadahadalado laga galo doorashada Soomaaliya.